निजामति कर्मचारीले भने विधि र मापदण्ड बनाएर मात्र समायोजन गरौं « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
ढुंगेललाई माफी दिनेबारे सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिनुपर्ने कारणसहित लिखित
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले चक्रपथमा मनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनको चाइना रेलवे २५ व्युरो ग्रुप कम्पनीलार्इ
अमेरिकन कम्पनी जेब्राको सहयोगमा नेपालमा नै स्मार्ट कार्ड उत्पादन गर्ने प्रविधि भित्रियो
रमेश लम्साल, काठमाडौँ । तपाईंले सवारी साधनको चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि कति समय कुर्नुभयो ?
नेपाल बैंकको प्रिमियमसहित २८० रुपैयाँमा एफपिओ आउँदै
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रतिशेयर प्रिमियमसहित २८० रुपैयाँमा एफपिओ निष्काशन गर्ने भएको छ ।
बिरामी छोराको उपचार गर्न अस्पताल हिडेकी सविताको उपचार नै गर्न…
एसियन लाइफको ९८ हजार कित्ता सेयर लिलामी खुल्यो, कहिले सम्म…
चक्रपथमा मोनोरेल अध्ययन गर्दै चिनियाँ टोली, गुड्ला त काठमाडौंमा रेल…
के हो महिलाको स्तन क्यान्सर ? कसरी थाहा पाउने ?
अष्ट्रेलियाका धनाढ्यको सूचीमा शेष घले, एक वर्षमै थपियो २३ करोड…
काठमाडौं । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले गत पुस २२ गते पारित गरेको ३१.४८ प्रतिशत बोनस सेयर